ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီရဲ့ ဗဟို ကော်မတီ အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီး၊ အစည်း အဝေး ကနေ ၂၀ဝ၈ အခြေခံ ဥပဒေထဲ မှာ ပြင်ဆင် ဖို့နဲ့ ပယ်ဖျက် အချက် ပေါင်း ၇၃ ချက် ကို အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ် လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
လွှတ်တော် ထဲမှာ ကိုယ်စားလှယ် ဦးရေ ၈၀ ရာခိုင် နှုန်း ကျော် နေရာရ ထားတဲ့ အခုလို အာဏာရ
Posted by Gentle Men at 1:43 PM No comments:
ထိုသို့ ဖမ်းဆီးနေစဉ် နံနက် ၁၀ နာရီ တွင် ဒညင်းကုန်း လမ်းဆုံအနီး၊ ပြင်စည်မင်းသားကြီး လမ်းမပေါ်တွင် စည်းကမ်းမဲ့ ရပ်နားထားသည့် အနီရောင် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးအား တွေ့ရှိစစ်ဆေးရာ ဆိုင်ကယ်စီးနင်းသည့် ၃၆ ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်နေ မောင် --- ၃၅ နှစ်မှ ကတ်ကြေးဖြင့်ထိုးကာ အတူပါလာသည့် မောင် ----မှာလည်း လေထိုးပိုက်ဖြင့် ရိုက်နှက်ခဲ့ကြောင်း
ရဟန်းဆိုတာ ပါရာဇိက မကျမချင်း ရဟန်းပါဘဲ..။
လူဝတ်လဲချင် စိတ်မရှိရင် ရဟန်းအဖြစ်မှ လျှော
လူဝတ်လဲခါနီး သိက္ခာချရင်တောင် ရဟန်းအဖြစ် မှ
ကာယကံရှင်ဆန္ဒပါမှ သိက္ခာချခြင်း အမှု ပြီးမြောက်
ရဟန်းတစ်ပါးကို ကိုယ်နှုတ်စိတ်နဲ့ပစ်မှားတာတောင် ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ယောက်အနေနဲ့ လွန်လှပါပြီ..။
Posted by Gentle Men at 1:18 PM No comments:
Posted by Gentle Men at 1:11 PM No comments:
စေခိုင်းသူများအကြား အငြင်းပွားမှု ဖြစ်ပွားနေကြောင်း ဆန္ဒပြ ရာတွင်
ယင်းလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အမိန့်တွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နှင့် ထိုနေ့မတိုင်မီ မတရားအသင်း အက်ဥပဒေပါ ပြစ် မှုများ၊ နိုင်ငံတော် သစ္စာဖောက်ဖျက်ပုန်ကန်မှု
Posted by Gentle Men at 10:40 AM No comments:
ဦးဇာဂနာက သူရဦးရွှေမန်းဟာ နိုင်ငံရေး
အတွေး သိပ်မကောင်းဘူးလို့ ဆိုပြီး
The Messenger က သူရဦးရွှေမန်းနဲ့
ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲလို့ မေးမြန်းခဲ့ချိန်မှာ ဦးဇာဂနာက ယခုလို ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
"ဦးရွှေမန်းကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတော့ သိပ်မသိပါဘူး။ သို့သော် မြင်ကြည့်တဲ့ အမြင်ကတော့ ဦးရွှေမန်းက နိုင်ငံရေးအတွေး
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ထင်ရှားသည့် ကာတွန်းဇာတ်ကောင်များကဲ့သို့ ၀တ်ဆင်ပြီး ပရိတ်သတ်များ ၏ရွေးချယ်မှုဖြင့် ဆုပေးသည့် ပွဲတော်ဖြစ်သည်။
ပွဲတော်တွင် ဂျပန်ကာတွန်း စာအုပ်များ၊ ဇာတ်ကားများ၊ အ၀တ်အထည်များ၊ အစား အသောက်များ ရောင်းချခဲ့ သည်။
ပွဲတတ်ရောက်လာသူများကလည်း ဂျပန်လူငယ်များကဲ့သို့ ၀တ်ဆင်
Posted by Gentle Men at 3:45 PM No comments:
ဂျပန်- အာဆီယံ ယူ၁၄ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ မြန်မာအသင်း သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည်
ဂျပန် ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် (JFA)မှ ဖိတ်ခေါ်သည့် အသက် ၁၄ နှစ်အောက် လူငယ် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ( Japan- Asean U14 Football Exchange Programme)ကို မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် ယူ၁၄ အသင်း သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင် ကစားမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ပြိုင်ပွဲကို ၂၀၁၄ ဧပြီ (၁)ရက်နေ့ မှ (၉)ရက်နေ့ အထိ ဂျပန်နိုင်ငံ အိုဆာကာ မြို့တွင်ကျင်းပ သွားမည်ဖြစ်ပြီး အိမ်ရှင် ဂျပန်အသင်း နှင့်အတူ အာဆီယံ ဒေသမှ အသင်း(၁၁)သင်း စုစုပေါင်း အသင်း (၁၂) သင်း ယှဉ်ပြိုင် ကစားကြမည် ဖြစ်သည်။ ဂျပန် ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် အနေဖြင့် ယခုပြိုင်ပွဲအား ၂၀၂၀ အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲအတွက် ကစားသမား ကောင်းများ ပေါ်ထွက်လာရန် ရည်ရွယ် ကျင်းပခြင်း ဖြစ်ပြီး အာဆီယံ
Posted by Gentle Men at 12:51 PM No comments:
မြန်မာပြည် ဆင်းရဲတွင်း နက်ခဲ့ရသော အဖြစ်ရဲ့
အခြေခံအကျဆုံး အကြောင်းတရားကို ဖော်ပြပါ
ဟုဆိုလျှင် မညီညွှတ် လို့ ဟု ... ခပ်တိုတို ပြတ်ပြတ်
ပြောရလိမ့်မည် ထင်ပါသည် ။
၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးရ ပြီးနောက် . ၃ လ
အကြာတွင် စတင်ခဲ့သော ပြည်တွင်းစစ်မီးမှာ
ယနေ့ ထက်တိုင် မီးကြွင်းမီးကျန် များ ကတော့
စစ်ဖြစ်နေလျှင် စစ်တပ်က အရေးပါနေမည်
ဖြစ်ပါသည်. စစ်ပွဲ ၏ အဟုန်က ကြီးမားလေ ..
စစ်တပ်၏ အခန်းကဏ္ဍ က ကြီးမားလေ ဖြစ်ပါ
Posted by Gentle Men at 8:27 AM No comments:
ပရိသတ်ဆန္ဒနှင့် တစ်ထပ်တည်း ကျစေခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ ကို ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက် မွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏမိုးလုံလေလုံ အားကစားရုံတွင် ပြုလုပ်
Posted by Gentle Men at 8:13 AM No comments:
၂ဝ၁၂ အတွက် ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု၏ ၉ဆု
အနက် ဥ ဇာတ်ကားဖြင့် ဒါရိုက်တာဆု၊
၃ဆုကို ရရှိခဲ့ပြီး ကယန်းအလှဇာတ်
ကားဖြင့် ဓာတ်ပုံဆုနှင့် အသံဆု ၂ခု
၂ဝ၁၂ အတွက် ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုများအနက် အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆုနှင့် အကောင်းဆုံး
Posted by Gentle Men at 7:48 AM No comments:
မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်ဆုပေးပွဲ အစီအစဉ်မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု (အကယ်ဒမီ)ပေးပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၃ နာရီ အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ၄င်းအကယ်ဒမီ ပေးပွဲတွင် အစီအစဉ်ခုနစ်ချက် ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ အစီအစဉ်(၁)တွင် 'မြန်မာ့မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်' တေးသီချင်းဖြင့် ပဏာမ ဖျော်ဖြေ မည်ဖြစ်ပြီး ညီထွဋ်ခေါင်၊ စည်ဖြိုး၊ စိုးရန်အောင်၊ ဇေရဲထက်၊ ကောင်းပြည့်၊ ဂျွန်ဂို၊ ထိုက်စံမော့စ်၊ စူးရှ၊ ချမ်းမေမြတ်နိုး၊ ဧကရီမှူး ပိုင်၊ဘေဘီမောင်၊ ရှင်ယွန်းမြတ်၊ မီးနို၊ ငြိမ်းစုသာ၊ ထက်ထက်စု လှိုင်နှင့် ရှင်းရှင်း တို့က သီဆိုကြ မည်ဖြစ်သည်။
၄င်းနောက်တွင် The Trees Band နှင့်အတူ ချိုပြုံး၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗို၊ မေဆွိ၊
ဒီနေ့ ငထော် မြီု့တက်တုန်း သတင်း တစ်ပုဒ်ကြားရတာ ၀မ်းသာလိုက်တာ ဗျာ..
အဲဒီသတင်းက ဒီလိုတဲ့ ဗျို့....
ဒီကနေ့ ကျွန်တော်ကြားသိရတဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ
သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ အထက်မြန်မာပြည် (မန္တလေး) အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ထိန်း သိမ်း စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့နှင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်များသမဂ္ဂ
အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံတော်
သမ္မတအရည်အချင်းသတ်မှတ်ထားသည့် ၅၉(က)(စ)ဥပဒေပါအပိုဒ် မပြင်ဆင်ရေးအတွက်
Posted by Gentle Men at 6:22 PM No comments:
ဆိုမှုတွေ ထွက်ပေါ် လာနေပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ
Posted by Gentle Men at 12:25 PM No comments:
စပိန်တီဗီသတင်းဌာနကသတင်းကြော်ငြာသူကာဘိုနာရို။ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွေမှာ သူ့ ရဲ့ လှပတဲ့မျက်နှာနဲ့သတင်းထောက်အရည်အသွေးကိုတွေ့ မြင်နိုင်ပါတယ်။
Posted by Gentle Men at 12:03 PM No comments:
လူကြီး(၁)။ ။မောင်ရင် အဲ့သည့်ကား
ကို ချက်ခြင်းပြင်!. . .
အင်ဂျင်လား...လားလားလား???. . .
လူကြီး(၁)။ ။အဲ့ဒါတော့ ငါလဲမသိဘူးကွ
မလေးရှားမှာပိတ်မိနေတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားများကို မြန်မာသံရုံးအရာရှိတွေမနက်ဖြန်တွေ့မည်
မလေးရှားနိုင်ငံ ဆာရာဝပ်ပြည်နယ်၊ မီရီမြို့မှာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသား အလုပ်သမားတွေက ရန်ပြုတာကြောင့် ပိတ်မိနေတဲ့ မြန်မာ အလုပ်သမား ၉၈ ယောက်ကို မလေးရှားနိုင် ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးက သံအရာရှိတွေနဲ့ အလုပ်သမားအေဂျင်စီက ကိုယ်စားလှယ်တွေ မနက်ဖန်မှာ သွားရောက်တွေ့ဆုံမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီးမှသာ
ပြည်သူလူထုအကျိုးကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်၍ရကြောင်း ဦးသိန်းညွန့် ပြောကြား
ဥက္ကဋ္ဌ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်ကဆိုသည်။
အိမ်ကျယ် မီဒီယာများ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ နေမျိုးဝေ တွေ့ကြလေသော်...
အတွဲ ၁ အမှတ် ၃၉ ၁၂.၁၂.၂၀၁၃
ကြာသာပတေးနေ့ ထုတ် ပြည်သူဆန္ဒ
"အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ရှေတန်း
ဦးနေမျိုးဝေ နှင့် ပြည်သူဆန္ဒ ဂျာနယ်တို့
မေး- “ အမျိုးဘာသာ သာသနာကို
နေမျိုးဝေ- " -ီး ပဲ၊ အနားမှာရှိရင်
ေ-ာက် ခွက်ဖြတ်ရို က်ပြစ်လိုက်တယ်"။
မေး- “ဟဲလို ကြားရလားခင်ဗျာ
ကျွန်တော်မေးနေ တဲ့ မေးခွန်းကို
သြစတြေးလျ နိုင်ငံ မဲလ်ဘုန်း မြို့တွင် ပြည်သူ
အများ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် သုံးရင်း ရေနှင့် နီးသော
နေရာများ တွင် လမ်း မလျှောက်ကြရန် ရဲများ
က သတိပေးနေရသည်။ အကြောင်း မှာ
ထိုင်ဝမ်မှ ကမ္ဘာ လှည့်ခရီးသည် တစ်ဦး
ဆိပ်ခံ တံတားပေါ်တွင် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်
သုံးကာလမ်းလျှောက် ရင်း ရေထဲ ပြုတ်
Posted by Gentle Men at 7:55 AM No comments:
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့တတ်သည့်နေရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ရှစ်မိုင် လမ်း ဆုံတွင် ဂျပန်နည်းပညာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် အဆင့်မြင့် ခေတ်မီမီးပွိုင့်အားစမ်းသပ် တပ်ဆင်အသုံးပြုနေကြောင်းသိရသည်။(ဘယ်လိုပိုင့်တွေတပ်တပ်..ယာဉ်တွေ..လမ်းကူးသူတွေ.
၄င်းအဆင့်မြင့်ခေတ်မီမီးပွိုင့်ကို ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုသက်သာစေရန်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံ JICA မှ
အာရှဖလားပြိုင်ပွဲသို့ ဝင်ရာက်ယှဉ်ပြိုင်မည့်မြန်မာ ယူ-၂၂ အသင်း
အသက်၂၂ နှစ်အောက်အာရှဖလားပြိုင်ပွဲသို့ ဝင်ရာက်ယှဉ်ပြိုင်မည့်မြန်မာ ယူ-၂၂ အသင်းသည် ယနေ့ညနေ ၄နာရီတွင် ဧရာဝတီယူနိုက်တက်အသင်းနှင့် အောင်ဆန်းကွင်းတွင်ခြေစမ်းပွဲယှဉ်ပြိုင် ကစားခဲ့ရာ ၄ဂိုး ၁ဂိုးဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ အိုမန်နိုင်ငံတွင်ကျင်းပမည့် အဆိုပါ အာရှဖလား ယူ-၂၂ ပြိုင်ပွဲတွင် အရှေ့တောင်အာရှဒေသမှ မြန်အသင်းတစ်သင်းသာခြေစစ်ပွဲအောင်မြင် ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။မြန်မာ ယူ-၂၂ အသင်းသည် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်လေ့ကျင်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုင်းပရီးမီးယား လိဂ်မှ အသင်းအချို့ဖြင့်ခြေစမ်းပွဲများကစားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
Posted by Gentle Men at 5:54 PM No comments:
အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ရှေးရှုလျှင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပုဒ်မ- ၅၉(စ) မပြင်သင့် သမ္မတဖြစ်ခွင့် ပုဒ်မ- ၅၉(စ) သည် ပထဝီနိုင်ငံရေးနှင့်အညီ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းစဉ်ဖြင့် ပြဌာန်းထားသည့်ဥပဒေဖြစ်ဟုဆို
၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပါ ပုဒ်မ- ၅၉(စ)သည်
တရုတ်၊ အိန္ဒိယကဲ့သို့ နိုင်ငံကြီးနှစ်ခုကြား ရောက်နေ
သည့် မြန်မာနိုင်ငံ ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်ရေး
အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား အကျိုးစီးပွားလို လား
ဒေါက်တာဆလိုင်း ငွန်ကျုံးလျန်က ပြောသည်။
”ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ-၅၉(စ)ဟာ နိုင်ငံခြား
သားကို လက်ထပ်သူ၊ သြဇာခံအထောက်အပံ့ ခံနေတဲ့ ဆက်နွှယ်နေသူတစ်ဦး တစ်ယောက်ကို ရည်ညွှန်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမ္မတမဖြစ်နိုင်ရေး အတွက် ပြဌာန်းရေးဆွဲထားတာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကိုလည်း ပြတ်ပြတ်သား သားပြောရဲပါတယ်။
သန်း ၆ဝ ကျော်ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး ရဲ့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ကြည့်ပြီး ရေးဆွဲပြဌာန်းခဲ့သလို၊ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင်က
Posted by Gentle Men at 5:45 PM No comments:
Posted by Gentle Men at 3:41 PM No comments:
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် NLD ပါတီဝင်များမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းကို ဆန္ဒပြရန် စီစဉ်နေကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။ HIV ရောဂါသည်များကို ကူညီသည့် သာမန် လူတစ်ဦးမှ ရုတ်တရက် လွှတ်တော်အမတ်ြ ဖစ်လာတဲ့ ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းဟာ နိုင်ငံရေး နားမလည်၊ ဥပဒေများကို နားမလည်၊ NLD ရဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကို နားမလည်ပဲ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် NLD ရုံးအတွင်း လုပ်ချင်သလို လုပ်နေကြောင်း ကို NLD
Posted by Gentle Men at 3:39 PM No comments:
Posted by Gentle Men at 3:32 PM No comments:
(၂၇-၁၂-၂၀၁၃)ရက်မှ (၂-၁-၂၀၁၄)ရက်နေ့အထိ လာမယ့်ရက်သတ္တတစ်ပတ် အတွင်း မြန်မာ တစ်နိုင် ငံလုံးမှာ ညအပူချိန်တွေ 10 C အောက်လျော့နှိုင်တဲ့ မြို့ဟာ တစ်မြို့တည်းသာရှိနေပြီး..အဲ ဒီမြို့ဟာ မြစ်ကြိးနားမြို့ဘဲဖြစ်
ဒေသအလိုက်ပြောရင်တော့ ကချင်ပြည်နယ်အရှေ့မြောက်ပိုင်း နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့မြောက်
Posted by Gentle Men at 3:28 PM No comments:
သင်၏ ကိုယ်တုံးလုံး ဝတ်လစ်စားလစ်ပုံကို သင့်ခွင့်ပြုချက် မရဘဲ တစ်ယောက်ယောက်က အင်တာနက်ပေါ် တင်လိုက်လျှင် မည်ကဲ့သို့ ခံစားရမည်နည်း။ ယင်းသို့ ဖြစ်စဉ်မျိုးကို ‘လက်စားချေ အပြာပုံများ’ လို့ ခေါ်ကြသည်။ ကင်မရာ ကောင်းသော မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ခေတ်တွင် ဒီလိုခံလိုက်ရသူတွေ များသည်ထက် များလာနေသည်။ တချို့ကတော့ ခေါင်းငုံ့မခံကြ။
Posted by Gentle Men at 3:20 PM No comments:
ရွှေလင်ဗန်း ချောင်းဘေးရှိ မြေကွက်
များပေါ်တွင် ကျူးကျော်တဲများ ဆောက် လုပ်နေသည်ကို ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက် က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ဥာဏ်ဝင်းရှိန်)
လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၁၅ ရပ်ကွက် ရွှေလင် ဗန်းချောင်း ကမ်းဘေးရှိ အိုးအိမ် ပိုင် မြေ ကွက်လွတ်များပေါ်တွင် ကျူးကျော်တဲများ ဆက်လက် ဆောက်လုပ်နေမှုအပေါ် ဥပဒေအရသာ အရေးယူသွားမည်ဟု အဆိုပါ
မူးယစ် ဆေးဝါး ချက်လုပ်သော စခန်းပုန်း နှစ်ခုအား လက်နက်/ ခဲယမ်းများ နှင့်အတူ ဖော်ထုတ် သိမ်းဆည်း ရမိ
ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် အတွင်းရှိ နယ်မြေခံ ပြည်သူများ၏ သတင်းပေးချက် အရ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ရက် နံနက် ၆နာရီခွဲတွင် နယ်မြေခံ တပ်မှ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များ နှင့်အတူ မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီး နှိမ်နင်းရေး ဌာနမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များ ပါဝင်သည့် ပူးပေါင်း အဖွဲ့သည် နယ်မြေ ရှင်းလင်း ဆောင်ရွက် ရာ ရှောက်ဟော် ကျေးရွာနှင့် လုံထန် ကျေးရွာ
Posted by Gentle Men at 3:08 PM No comments:
အခု တစ်ချို့ ဖွနေကြတဲ့ ....
အသေအချာ နားထောင်ကြည့်တော့ ...
ပြောသွားတဲ့ အထဲ အဓိက ကျတာတွေက ...
၁။ CPI က သူတို့ ရပ်ထားရတာ နစ်နာတယ်...
ဒါကြောင့် ပြန်လုပ်ချင်တယ်လို့ ပြောတယ်...
၂။ မြန်မာနိူင်ငံအနေနဲ့....
အရင်အစိုးရနှင့် ချုပ်ခဲ့သော စာချုပ်တွေကို
Posted by Gentle Men at 2:53 PM No comments:
Posted by Gentle Men at 2:40 PM No comments:
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာသည် ပင်ကိုယ်ကတည်းက လွတ်လပ်စွာ ရေးသား၊ ပြောဆိုခွင့် ကို ပေးထား၏။ထို့ ကြောင့် ပင် မြန်မာများသည် မည်သည့် အမည်နာမ၊ အကြောင်းအရာများကို
Posted by Gentle Men at 2:31 PM 1 comment:
အောင်ဆန်း(ခွင့်လွှတ်ပါ)သမီးဖြစ်အောင် လုပ်ပါတော့။ဇရာဆိုတာငြင်းပါယ် လို့မ
Posted by Gentle Men at 1:15 PM No comments:
Posted by Gentle Men at 1:07 PM No comments:
မွတ်ကုလားယုတ်များ ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၊
ဒီမိုလုပ်စားများ နှင့် အကြမ်းဖက်သောင်း
ကြမ်းသူများကို တိုက်ခိုက်နေပြီး ခင်များတို့
ကျွန်တော်ကို အပုတ်ချရန် မည်သူကို လော်ဘီ
လုပ်ပေး နေပါတယ် ဆိုတာ ခေါင်းစဉ်တပ်မရ
ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး၏ အကျိုးကိုမကြည့် ၊
အမျိုးသားရေးကို ဦးစားမပေးပဲ မိမိအတ္တကို
ရှေ့တန်းတင် ၊ တိုင်းပြည်ပျက်အောင် လုပ်နေ
သူဟု ယူဆရသူအားလုံးကို ကျွန်တော်မှ
သလောက် တိုက်ဖြုတ်သွားမည့်သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုတော့ ယနေ့
အချိန်ထိ တိုက်ခိုက်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက် မရှိသေး
ပါ။ ပုဂ္ဂိုယ်ရေး လေးစားမှုလည်း ရှိပါတယ်။
သိုသော် သူမ၏ လော်ဘီများ နှင့် မွတ်ဒေါင်းများကြောင့်
KIA တပ်မဟာ(၁)မှ အမျိုးသမီး ၇ ဦး တပ်မတော်နှင့် လာရောက် ပူးပေါင်း
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁၂ ရက်နေ့
တွင် KIA တပ်မဟာ(၁)မှ အမျိုးသမီး
၇ ဦးသည် နီးစပ်ရာ တပ်စခန်း
သို့ လာရောက် ပူးပေါင်းကာ လက်
နက်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လဲလှယ်ခဲ့
၄င်းတို့၏ ပြောပြချက်အရ KIA အတွင်း အမျိုးသမီးများသည် တန်းတူ ညီမျှသော အခွင့်အရေး များ မရရှိခြင်း၊ အနိုင်ကျင့် ခံရခြင်းများ ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် KIA ခေါင်းဆောင်များ အနေဖြင့် အမျိုးသမီးငယ် များအား ၄င်းတို့ စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ပြီး ၄င်းတို့၏ အနားတွင်
Name- Zar Zar Htet
Nick Name- Acid / Hottie
Professional- Photo Model
Education- L.L.B , Japanese Language Studies
Date of Birth- 11 March 1988
Posted by Gentle Men at 9:26 AM No comments:
KIA ဖမ်းဆီးခံ ရှမ်းပြည်သူများ ပြန်လွတ်မလာပါက ထပ်မံဆန္ဒထုတ်ဖော် သွားမည်ဟု ရှမ်းနီ ခေါင်းဆောင်များကပြော
KIA ၏ တပ်သားသစ် စုဆောင်းဖမ်းဆီးခြင်းခံရသော မံစီမြို့နယ် မံဖွရွာက ရှမ်းတိုင်းရင်းသား အများ စုမှာ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်း မရှိသေးဘဲ KIA အင်ဘာပါတပ်စခန်းမှာ သင်တန်း တက်နေ ရတယ်။" လို့ မံဖွရွာ ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောဆိုသည်။KIA ဖမ်းဆီးသော ရှမ်းရွာ သားအား လုံး ပြန်လွတ်လာပြီဟု မီဒီယာများနှင့် မြစ်ကြီးနားမြို့ ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင် PCG အဖွဲ့ က ပြော ဆိုထားပြီး ပြန်လွတ်မြောက်လာသူအချို့မှာလည်း ငွေကြေး အမြောက် အများပေးဆောင်
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပထမဆုံး တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ စက်ရုပ် အာကာသ ယာဉ်မှူးလေးဟာ အာကာသထဲမှာ စကား စပြောပြီလို့ ဂျပန် နိုင်ငံက ပြောကြား
ကီရိုဘိုလို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ ဒီစက်ရုပ်လေးကို ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လက ဂျပန်ကနေ အာကာသကို လွှတ်တင်လိုက်တာဖြစ်ပြီး အခုတော့ စက်ရုပ်လေးဟာ နိုင်ငံတကာ အာကာသ စခန်းကို ရောက်ရှိ သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အာကာသစခန်းက ဂျပန် အာကာယာဉ်မှူး အရာရှိ ကိုအိချိ ဝါကာတာကို စက်ရုပ်လေးကနေ စကားပြောနေတာကို
Posted by Gentle Men at 9:08 AM No comments:
သေချင်လောက်အောင်ထိ ဆိုးနေတဲ့ကံကို ကုသိုလ်၅-မျိုးနဲ့ ပြုပြင် ယူလို့ရပါတယ်။ တိုက်တွန်းစကားအနေနဲ့
ပြောရ ရင်တော့ သေချင်လောက်အောင် ဆိုးနေတဲ့ကံကို ကုသိုလ် ၅မျိုးနဲ့ နေ့စဉ်ပြုပြင် ပစ်လိုက်စမ်းပါ။ ဆိုးနေတဲ့ကံ ” နင်နေ ငါသွား ” ဖြစ်သွား ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီကုသိုလ် ၅မျိုးကတော့… ၁။ ဒါန ၂။ သီလ ၃။ ဂုဏ်တော် ၄။ မေတ္တာ ၅။ ၀ိပဿနာ တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကုသိုလ် ၅မျိုးကို နေ့စဉ် ဖြစ်စေရမယ်လို့
ပုံတွင် ဖော်ပြပါ ဆေးအမျိုးအစားသည် အမျိုးသမီးများ သောက်သုံးမည့် အချိုရည် ၊ ရေ နှင့် အစားအသောက်များတွင်း သို့ ဆေးရေ နှစ်စက် သုံးစက်မျှ ထည့်သွင်းရုံဖြင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ကာမစိတ်ကို ပြင်းထန်လာစေ သည်ဟု သိရပါသည်။
အရောင် ၊ အနံ့ နှင့် အရသာ မရှိခြင်းတို့ကြောင့် လူငယ်ထုများ သုံးစွဲကြသည် ဟုဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိချစ်သူ ၊ အမျိုးသား သူငယ်ချင်း များ ကျွေးသော အစားအသောက်များကို အလွယ်တကူ စားသုံးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အကျိုးဆက်များကို ရှောင်လွဲနိုင်စေရန် အတွက် ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်ဘက်မှာ အတွေ့များသည် ဟု သိရပါသည်။
ဆန္ဒပြ သူများကို ထိုင်းရဲဖြိုခွင်း၊ ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရမှုများ ရှိ
မှာ ရွေးကောက်ပွဲကို ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြနေသူတွေကို ရဲအဖွဲ့က မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေ၊ ရာဘာ ကျည်ဆန်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့ လို့ တော်တော်များများ ဒဏ်
တွ မှတ်ပုံတင်ဖို့ သတ်မှတ်ထား
ကျနော် အခု လေးတင် လားရှိုးမှာ
သီချင်း ဆိုပြီး တာပါ။
မနက်ဖြန် မ ကွေးဆက် သွားရမှာပါ။
ပုရွက်ဆိတ် တ ကောင် ကို သတ်မိ
၂ရက် လောက် စိတ် မ ကောင်းဖြစ်နေ
တဲ့ကောင် ပါ။ရန်ဖြစ်ဖို့ မ ပြော ပါနဲ့
-ီးပဲလို့ မျက်နှာချင်းဆိုင် လာ ဆဲနေ
ရင် တောင် ဟီးဟီးဟီး ဆိုပြီး
စပ်ြ ဖဲဖြဲ နဲ့မျက်နှာပြောင် တိုက်ြ
ပီးရှောင် တဲ့ကောင် ပါ။့
အ ပျော်လုပ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်
တမင် ဒုက္ခ ပေး ချင် တာပဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်ရေး အတားအဆီးဖြစ်သည်ဆိုသည့် ပုဒ်မ မပြင်ရန် အကြံပြုစာ ၅၀,၀၀၀ ကျော် ရရှိထား
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်ရန် အဟန့်အတားဖြစ်နေသည့် ပုဒ်မ ၅၉(စ) အပါအ၀င် ပုဒ်မ ခုနစ်ခု ကို မပြင်လိုကြောင်း ပြည်သူများ၏ အကြံပြုစာ ငါးသောင်းကျော် လက်ခံရရှိထား သည်ဟု ပြည် သူ့လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သိန်းလင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“ပုဒ်မ ၆(စ)၊ ပုဒ်မ ၄၂(ခ)၊ ပုဒ်မ ၅၉(စ)၊ ပုဒ်မ ၃၃၇၊ ပုဒ်မ ၃၃၈၊ ပုဒ်မ ၄၃၆၊ ပုဒ်မ ၄၄၆ အဲဒါတွေကို မပြင် ဘဲ ဒီအတိုင်းဆက်ပြီးထားပါလို့ အကြံပြုစာ ငါးသောင်းကျော် ရောက်နေပါပြီ။ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လေ့လာစိစစ်ရေးကော်မတီကို ပို့ထားတာပါ။ ဒီအကြံပြုစာတွေအပြင် တောင်ဥက္ကလာမှာ ဆွေးနွေးချက်တွေရော၊ ရန်ကုန်တိုင်းမှာ ဆွေးနွေး ချက်တွေ ကိုစုပြီး ဖွဲ့စည်းပုံလေ့လာ သုံးသပ်ရေးကော်မတီကို ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်မတိုင်မီ ပို့မယ်”
Posted by Gentle Men at 11:37 AM No comments:
ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ပြီး လျှောက်သွားတာ ဘယ်သူမှ မသိလိုက်ဘူး (ရုပ်/သံ) - THIT HTOO LWIN
ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ပြီး လျှောက်သွားတာ ဘယ်သူမှ မသိလိုက်ဘူး (ရုပ်/သံ) -
တခါမှာတော့ ညီလာခံအပြီး ဘုရင်ကြီးနဲ့ မိဖုရား ပြန် လည်ထွက်ခွာသွားချိန်မှာ အမတ်ကြီးက မထင်မှတ် ဘဲ မော့ကြည့်မိလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အခါမှာ အဆင်းလှပတဲ့ မိဖုရားရဲ့ မမြင်အပ်တဲ့အပိုင်း (အနောက်ပိုင်း) ကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အချိန်က စလို့ အမတ်ကြီးလည်း မိဖုရားကို စွဲလန်းတဲ့ တဏှာစိတ်ကြောင့် မစားနိုင်၊ မအိပ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ တိုင်းရေးပြည်ရေမှာလည်း ယခင်လို တက်ကြွစွာပါဝင်ဆွေးနွေးမှုမရှိတော့ဘဲ မမှီတော့တဲ့ပန်းကို